Wararka MaantaBadhan Online Page 2 :: Badhan Online
Badhan-Online.com- Urur weynaha Reer Maakhir ee Qurba Joogtu ku Midaysantahay ayaa Shir balaadhan oo ay abaabulkiisa lahaayeen Markii ugu horasay Gudaha ku qabtay. Ujeedka Shirkaasi oo ahaa Xoraynta Buuraha & Midnimada Beelaha ayaa ahaa mid looga doodayay sida ugu wanaagsan ee loo wajahayo arrimahan. By Jama Feyte
Suxufiga Jama Y Deperani oo ah Wariye Somaliyeed oo Bulshadu jeceshay Barnaamijyadiisa ayaa aqoon korarsi u Jooga Dalka Holand Gaar ahaan Amsterdam waxana soo dhaweeyay Jaaliyada somaliyeed ee Halkaasi ku nool. Casho Sharaf & xog waraysi ka dib Jama Deperani waxa loo aqoonsaday Wariyaha Sanadka ee Somaliya isaga oo la Gudoonsiiyay Bilad sharaf oo […]
(Columbus- Badhan-online- Guddiga Siyaasada Maakhir oo shir ku qabtay Magaalada Columbus ee Gobolka Ohio ayaa Baaq u diray Shirkada DP-World oo lagu wareejiyay Dekeda magaaalada Bosaaso & Dekedo kale oo Deegaankaasi ka mid ah. War-Saxaafadeed ay Guddigu ku Saxeexanyihiin ayaa lagu sheegay inay Cawaaqib xumo keeni karto hadii aan laga fiirsan dhul-baraarsiga […]
Posted on September 17,2017 by admin
Badhan Online– Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa shalay booqday xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ee kala qeybiya magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandheera. Axmed Madoobe ayaa waxaa booqashadiisa ku wehliyay Mas’uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan Jubbaland, waxaana ay indha indheyn ku sameynayeen xaalada xuduuda. Sidoo kale Axmed Madoobe ayaa tagay halka ay dowladda Kenya ka dhiseyso darbiga, oo muddooyinkii […]
Qof bom isku xirey ayaa isku qarxiyey maqaaxi yar oo ku taaley dhinaca guriga gobolka, waxaana inta badan fariisan jirey shaqaalaha iyo ilaalada gobolka. Ugu yaraan laba qof ayaa weerarka lagu diley waxaana ku dhaawacmey 15 qof oo kale sida laga soo xigtey maamulka gobolka Hiiraan. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim Baadiyoow oo saxaafadda […]
(Badhan-Onlin-Garoowe) Oct 28, 2015 – Waxay reer Puntland Maalin xasuus Gaar ah mudan marka laga eego dhanka Siyaasada oo markaasi qalaalase xxoogan oognaa” Maalintaasi kor ku xusan ayuu Magalalada Garoowe kaga dhawaaqay Siciid Xasan Shire inuu baneeyay Afhayeenkii Baarlamaanka Puntland isaga oo u tudhaya Shacabka PL. War-Saxaafadeed uu Gurigiisa Garoowe ku qabtay waxa uu ku sheegay […]
Shiikhii ugu horeeyey ee argagixiso geliyey buuraha Calmadow ayaa ka hor yimid amarkii wasiirka amniga Puntland, Cali Xaaji Warsame oo ka mid ahaa hogaamiyaashii ugu horeeyey ee argagixisada Soomaaliya ka jirta maanta ayaa ka hor yinid amarkii looga hortagayey Alshabaab. Cali Xaaji Warsame oo ah aasay Miinooyinka weli Caruurta & Haweenka ku laaya Buuraha Calmadow ayaa […]
(Badhanonline-Garoowe) Guux Siyaasadeed oo balaadhan baa socda PL oo doorasho laysu diyaarinayo waxa socda xusul ku aadan galaalanka xildhibaanada imanaya 2019, durba xildhibanadii qaar baa Goboladii ku laabtay oo doonaya Saxeexa mar labaad isinkooda. Meelaha aadka looga arkaya arintaasi raadinta xildhibaanada waxa ka mid ah Gobolka Sanaag oo rag Ganacsato ah ay doonayaa Xubinimo Baarlamaan […]
(Badhanonline-Hargaysa) Somaliland oo Madax-banaani sheegata weli dadka & Beesha Caalakuma kuma qancin sida Maamulkaasi Woqooyi Galbeed u shaqeeyo marka laga eego awoodaha Maamul ee Siyaasadeed. Kuwa la jooga Somaliland ee Reer Sanaag maha kuwa metel magac ahaan Shacab weynaha reer Maakhir waa rag shaqa tegay oo qaarkood ay aabayaashood dileen Jabhadii Hubaysnayd ee NSM taasi […]